Frank – बाह्रथरी कुरा
प्राविधिक सहायक शैक्षिक योग्यताको हिसाबले यिनी कम्प्युटर इन्जिनियर हुन । व्यक्तिगत रूपमा यिनी आँखामा राख्दा पनि नबिझाउने सोझो, सरल र मिलनसार छन् तर यिनमा यस्तो काम मैले गर्ने हो र ? भन्ने सोच बेला न कुबेला आई दिन्छ अनि यस १२थरी टिमका सबैको गाली खान्छन् । मायालु छन त्यसैले मायाले सबैले गाली गर्छन् ;-) फेसबुक / ट्वीटरमा मा नेपालका नाम चलेका पत्रकार , लेखक , समालोचक यिनका फ्रेण्ड / फलोवर छन् । यिन्लाई सानो तिनो विकिपेडिया भने नि हुन्छ । यिनी यो त्यो सबै कुराको खबर राख्छन । यिनीलाई झ्वाँक चलो भने बिदा मनाउन नेपाल जान्छन ;-)
यो लेखलाई डेल्टा (Δ) किचकिचको नाम दिइएको छ। इन्टर/प्लस टु मा गणित पढ्नुभाका’लाई थाहै होला, सुरुमा “Δx बि स्मल इन्क्रिमेंट इन x” भनेर मानिन्छ पछि Δx→0भनेर यसको काम तमाम गरिन्छ । रियल जिन्दगीमा नि यस्तै हुन्छ। यस प्रसंगमा चैं x लाई बुढाबुढी बिचको किचकिच भनेर मान्नुस्। डेरिभेटिभ जस्तै यसलाई पनि पछि जिरोको नजिकै मानिन्छ र जिन्दगी अगाडि बढिरहन्छ। Δx कहिलेकाहीँ सजिलै हट्छ, हिसाब मिलिहाल्छ। कहिलेकाहीँ नहटेर तनाव दिन्छ – समय खान्छ। कहिलेकाहीँ त हिसाबै मिल्दैन।
भनिन्छ नि, लोग्नेस्वास्नीको झगडा परालको आगो ! जति नै लडे नि लास्टमा मिलिहालिन्छ।मिल्नु त के भन्नु, पुरुषले आत्मसमर्पण गर्छन् र जीत त सधै उग्रचण्डी महाकालीको स्वरुप धारण गरेका श्रीमतीको नै हुन्छ । श्रीमान पनि – हारे नि आखिर अङ्गालोमा आउन त आइ मेरो भनेर, “हार कर जित्ने वाला बाजिगर होता है” भन्ने फिलिङ्गस लिएर मुस्कुराउँछ। अन्ततागोत्वा, आगो बाल्न पनि मुढा/दाउरा ठाकठुक पार्न पर्छ भने जस्तै जोइपोइको सम्बन्धमा झन “बोन्ड” बढ्छ । १२ थरी टिममा महिला सहकर्मी नभएकाले यो लेख एक पक्षीय हुन गएमा क्षमा चाहन्छौं। अब यो लेख पढेर कोही नारी अधिकारवादीलाई औडाहा भएमा तल कमेन्टमा गएर फरिया उचाल्दै धारे हात लाएर सराप्नुहोला !!
Continue Reading “डेल्टा किचकिच” →
May 10, 2016 By Frank बाह्र सत्ताईस कुराOne Comment
चर्चा गरौं नेपाली क्रिकेटको सबैभन्दा पछिल्लो घटनाक्रमबाट। क्रिकेट फ्यानका लागि पछिल्लो समयको सबैभन्दा दु:ख दिएको समाचार हो, क्रिकेटको सर्वोच्च संस्था आइसीसीले नेपाल क्रिकेटलाई निलम्बनसम्म गर्न सक्ने गरि दिएको चेतावनी। र, त्यसको कारण- क्यानकी सुन्दरी सिईओ भावना घिमिरे। ठ्याक्कै एकजमानाका एन्फाका एकाधिकार अध्यक्ष गणेश थापाको दादागिरी अहिले यी क्रिकेटकी सिइओतिर सरेको छ। गणेश थापा फुटबलको सर्वोच्च संस्था फिफासँगको निकटताले फुटबलका तानशाह बने र नेपाली फुटबल कहाँ पुग्यो सबैलाई थाहा छ। अहिले क्रिकेटमा सिइओ घिमिरेले ठ्याक्कै थापाकै शैलीमा आइसीसीसँग निकट रहेर क्यानलाई घुमाउन थालेकी छिन्। Continue Reading “क्यानकी गणेश थापा : भावना घिमिरे” →
March 8, 2016 By Frank बाह्र सत्ताईस कुरा, मनोरञ्जन, समाज क्यान, क्रिकेट, गणेश थापा, भावना घिमिरे, सिईओ9 Comments